भारतमा कम्युनिष्ट पार्टीहरुको पराजय किन भयो ? – MeroOnline Khabar
भारतमा कम्युनिष्ट पार्टीहरुको पराजय किन भयो ?
यसपटकको भारतीय लोकसभा निर्वाचनले कम्युनिष्ट पार्टीलाई नराम्ररी झड्का दिएको छ । यो निर्वाचनले वामपन्थीहरूलाई लगभग पन्छ्यो भन्दा पनि हुन्छ । निर्वाचन मार्फत बामपन्थीहरुकै गढ मानिएको क्षेत्रमा कम्युनिष्ट पार्टी पाखा लागेको छ भनौ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले सखापै पार्‍यो । ३५ वर्षदेखि पश्चिम बंगालमा चुनाव जित्दै आएको माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा)को राजनीतिक बिजोग भएको छ ।
माकपाले २०११ सम्म राज्य सरकारको पनि नेतृत्व गर्दै आएको थियो । २००९ को निर्वाचनसम्म केन्द्रीय गठबन्धनको किङ मेकरसमेत रहेको माकपाले २०१४ मा नौ सिट मात्र सिमित हुन पुग्यो । तर, यसपालि उसले नौ सिट जोगाउनु त धेरै टाढाको कुरा आफ्नो पकड क्षेत्र बंगाल र त्रिपुराबाट सबै सिट गुमाएको छ । बंगालमा त्रिणमुल कंग्रेसले ४३.९५ मतसहित २२ र भाजपाले ४०.२५ मतसहित १८ सिट जितेका छन् । कंग्रेसले ५.६२५ मतसहित २ सिट जितेको छ । तर, सीताराम येचुरीले नेतृत्व गरेको माकपाले बंगालमा ६.२९५ मत पाएको छ । त्रिपुरामा १७.३३५ मत पाएको माकपाले शून्य सिट पाएको छ । राज्यका दुवै सिट भाजपाले पाएको छ । उसको मत ४९.०१५ छ । अर्थात भारतमा कम्युनिष्ट भनिएका दलहरुको पत्तासाफ भएकोछ ।
भारतमा कम्युनिष्ट भनिएका पार्टीहरुको पराजय किन भयो ? यसको पहिलो कारण कम्युनिष्ट भनिएका पार्टीहरुले कम्युनिष्ट विचार र व्यवहार छोडेर बुर्जुवा वर्ग कै विचार र व्यवहार अपनाउनु हो । जनताले नक्कली बुर्जुवा विचार वोकेको पार्टी भन्दा सक्कली वुर्जुवा वर्गको पार्टी रोजे । कम्युनिष्ट पार्टी भनिएपनि ती पार्टीहरुले वुर्जुवा पार्टीले जतिपनि जनपक्षीय कामहरु गरेर जनताको समर्थन टिकाइ राख्न सकेनन् । कम्युनिष्ट भनिएका नेता कार्यकर्ताहरुले शोषक सामन्त भ्रष्टहरुको समर्थन गर्दै कयौं स्थान र समयमा वहुसंख्यक जनताका विरुद्ध दमनको नीति अपनाए । शोषक सामन्त दलाल भ्रष्टहरुलाइ सजायँ दिनपर्नेमा उल्टै जनतामाथि दमनको नीति अपनाए ।
भारतमा जसरी कम्युनिष्ट पार्टी भनिएकाहरुको पत्तासाफ भएको छ, त्यो वास्तवमा सच्चा कम्युनिष्टहरुको हार थिएन । ती कम्युनिष्ट भनिएका पार्टीहरु वास्तवमा कम्युनिष्ट नाम राखेका वुर्जुवा वर्गमा वर्गपरिवर्तन भैसकेको थियो ।
पश्चिम वंगाल कै कुरा गर्दा चारु मजुमदारको नेतृत्वमा भएको किसान आन्दोलनलाई दवाउने र अनेकौं जनपक्षीय नेताहरुलाइ मार्न लगाउने काममा ती कथित कम्युनिष्ट भनिएका संशोधनवादी पार्टीको ठुलो हात थियो ।
नक्कली कम्युनिष्ट, संशोधनवादी कम्युनिष्टहरुको हार भयो, त्यो ठिक भएको छ । दक्षिणपन्थीहरुको लगातार विजय र संशोधनवादी कम्युनिष्टहरुको हारका विचवाटै क्रान्तिकारी र जनपक्षीय कम्युनिष्टहरुको उत्थानको वाटो खुल्नेछ ।
← भर्खरै रामेछाप केन्द्र भएर भूकम्प , भुकम्पपछि स्थानीयहरु सडकमा !
‘पत्नीभक्त’ सुमन , टिसर्टमा श्रीमतीको तस्बिर ! →